2 Madzimambo 6:1-33
6 Zvino vanakomana+ vevaprofita vakatanga kuti kuna Erisha: “Onai zvino! Nzvimbo+ yatiri kugara pamberi penyu yakanyanya kumanikana+ nokuda kwedu. 2 Tapota, regai tiende kuJodhani, mumwe nomumwe andozvitorera danda ikoko,+ tizvivakire nzvimbo yatingagara.” Naizvozvo akati: “Endai.” 3 Zvino mumwe wacho akati: “Ndapota, endaiwo nevashandi venyu.” Iye akati: “Ndichaenda.” 4 Naizvozvo akaenda navo, vakazosvika kuJodhani, vakatanga kutema miti.+ 5 Zvino mumwe akanga achitema danda rake, demo+ rikabva, rikawira mumvura. Akatanga kuchema achiti: “Maiwe, tenzi wangu+ kani, nokuti rakaita zvokukumbirwa!”+ 6 Munhu waMwari wechokwadi akabva ati: “Rawira papi?” Naizvozvo akamuratidza nzvimbo yacho. Akabva atyora kamuti akakakanda ipapo, akaita kuti demo riyangarare.+ 7 Zvino akati: “Ritore.” Akabva atambanudza ruoko rwake akaritora. 8 Zvino mambo weSiriya+ akarwa naIsraeri. Naizvozvo akarangana nevashandi+ vake achiti: “Muchadzika musasa pamwe chete neni panzvimbo yokuti neyokuti.”+ 9 Munhu waMwari+ wechokwadi akabva atumira mambo waIsraeri shoko, achiti: “Chenjererai kuti murege kupfuura nepanzvimbo iyi,+ nokuti vaSiriya vari kuuya ikoko.”+ 10 Naizvozvo mambo waIsraeri akatumira shoko kunzvimbo yaakanga audzwa nomunhu waMwari wechokwadi.+ Akamunyevera,+ akarega kuenda ikoko, kwete kamwe kana kaviri. 11 Naizvozvo mwoyo wamambo weSiriya wakagumbuka nokuda kwenyaya iyi,+ zvokuti akashevedza vashandi vake akati kwavari: “Hamungandiudzi here kuti pane vokwedu ndiani anonzwana namambo waIsraeri?”+ 12 Mumwe mushandi wake akabva ati: “Hapana, ishe wangu, asi Erisha+ muprofita ari pakati paIsraeri ndiye anoudza+ mambo waIsraeri zvinhu zvamunotaura muimba yenyu yomukati yokurara.”+ 13 Naizvozvo akati: “Endai munoona kwaari, kuti nditume vanhu vanomutora.”+ Gare gare akaudzwa kuti: “Ari kuDhotani.”+ 14 Akabva atuma mabhiza nengoro dzehondo neuto rehondo guru+ kwazvo ikoko; uye vakasvika usiku, vakakomba guta racho. 15 Mushumiri+ womunhu waMwari wechokwadi paakafumomuka, akabuda panze, akaona uto rehondo nemabhiza nengoro dzehondo zvakanga zvakakomba guta. Mushandi wake akabva ati kwaari: “Maiwe, tenzi wangu kani!+ Tichaiteiko?” 16 Asi iye akati: “Usatya,+ nokuti vari kwatiri vazhinji kupfuura vari kwavari.”+ 17 Erisha akatanga kunyengetera+ achiti: “Haiwa Jehovha, ndapota svinudzai maziso+ ake kuti aone.” Jehovha akabva asvinudza maziso omushandi wacho zvokuti akaona; uye tarira! nzvimbo yose ine makomo yakanga yakazara mabhiza nengoro dzehondo+ dzomoto zvakapoteredza Erisha.+ 18 Pavakatanga kuuya kwaaiva, Erisha akanyengetera kuna Jehovha akati: “Ndapota, pofumadzai+ rudzi urwu.” Naizvozvo akavapofumadza sezvakanga zvataurwa naErisha. 19 Zvino Erisha akati kwavari: “Iyi haisi iyo nzira yacho, uye iri harisi iro guta racho. Nditeverei, ndikuendesei kumurume wamuri kutsvaka.” Asi iye akavaendesa kuSamariya.+ 20 Zvino pavakangosvika kuSamariya, Erisha akabva ati: “Haiwa Jehovha, svinudzai maziso eava kuti vaone.”+ Jehovha akabva asvinudza maziso avo vakaona; uye vakaona kuti vaiva pakati peSamariya. 21 Zvino mambo waIsraeri akati kuna Erisha paakangovaona: “Baba vangu,+ ndivauraye here, ndivauraye here?”+ 22 Asi iye akati: “Usavauraya. Vaya vawatapa nebakatwa rako nouta hwako ndivo vaunouraya here?+ Isa zvokudya nemvura pamberi pavo kuti vadye, vanwe,+ vaende kunashe wavo.” 23 Naizvozvo akavaitira mutambo mukuru; uye vakadya, vakanwa, achibva azovarega vachienda, ivo vakaenda kunashe wavo. Mapoka evapambi+ evaSiriya haana kuzombouyazve kana kamwe chete zvako munyika yaIsraeri. 24 Pashure paizvozvo, Bheni-hadhadhi mambo weSiriya akaunganidza uto rake rose, akaenda, akakomba+ Samariya. 25 Kwapera nguva yakati, nzara yakavapo muSamariya,+ uye tarira! ivo vakanga vakarikomba kusvikira musoro wembongoro+ wava kuita masirivha makumi masere, uye chikamu chimwe chete pazvikamu zvina zvekebhu yemadororo enjiva+ chava kuita masirivha mashanu. 26 Zvino mambo waIsraeri zvaakanga achipfuura ari parusvingo, mumwe mukadzi akashevedzera kwaari achiti: “Ponesai, haiwa ishe wangu mambo!”+ 27 Iye akati: “Kana Jehovha asingakuponesi, ini ndichakuponesa nechii?+ nezvinobva paburiro kana kuti muchisviniro chewaini kana kuti muchisviniro chemafuta here?” 28 Mambo akati kwaari: “Zvaita seiko?” Naizvozvo iye akati: “Mukadzi uyu akati kwandiri, ‘Unza mwanakomana wako timudye nhasi, uye tichadya mwanakomana wangu mangwana.’+ 29 Naizvozvo takabika+ mwanakomana wangu, tikamudya.+ Ndakazoti kwaari pazuva rakatevera, ‘Unza mwanakomana wako timudye.’ Asi akaviga mwanakomana wake.” 30 Zvino mambo paakangonzwa mashoko omukadzi wacho, akabva abvarura+ nguo dzake; uye zvaakanga achipfuura ari parusvingo, vanhu vakaona kuti akanga akapfeka masaga pamuviri wake. 31 Akati: “Mwari ngaandiitire saizvozvo, uye ngaawedzere pazviri saizvozvo, kana musoro waErisha mwanakomana waShafati ukaramba uri paari nhasi!”+ 32 Zvino Erisha akanga akagara mumba make, uye varume vakuru vakanga vakagara naye,+ mambo paakatuma mumwe murume achibva kwaari. Nhume yacho isati yapinda maaiva, iye akati kuvarume vakuru: “Maona here kuti mwanakomana uyu wemhondi+ atuma sei munhu kuzobvisa musoro wangu? Onai: nhume yacho painongosvika pedyo, vharai suo, muisundidzire shure nesuo. Hakuna here mutsindo+ wetsoka dzashe wake shure kwake?” 33 Achiri kutaura navo, nhume yacho yakanga ichiuya kwaari, mambo akati: “Onai, iri idambudziko rinobva kuna Jehovha.+ Ndichamirireizve nokuda kwaJehovha?”+